Isevisi yokuklama iwebhusayithi
I-MID-MAN - I-Ejensi YE-WEBSITE DESIGN COMMIT UX/UI IZIDINGO EZINGALINGANISO
Ukuklama amawebhusayithi ekhwalithi ku-Mid-Man Agency. Ukudala nokuthuthukisa amasayithi aletha ukubaluleka nokusebenza kahle yizinjongo ithimba le-Mid-Man elihlose wena. I-Mid-Man izokusiza ukuxazulula inkinga yokufinyelela amakhasimende ngokusebenzisa isevisi, ukwakheka kwewebhusayithi, UKUCALA - UKUBONISA - I-SEO STANDARD - PROFESSIONAL KANYE OKUSEBENZAYO.
INGABE UNGENA KULO mkhuba noma uzibophezele ekulahlekeni?
Esikhathini sobuchwepheshe bedijithali 4.0, kanye nokuthuthuka okusheshayo kwe-inthanethi, ukuthambekela kwebhizinisi le-inthanethi noma ukuthengiswa kwe-inthanethi kulethe ukusebenza kahle komnotho emigqeni yebhizinisi eminingi Emhlabeni Wonke. Kuthiwani ngawe? Ingabe uyakha amawebhusayithi futhi ubambe iqhaza emakethe yebhizinisi le-inthanethi?
Ngokombiko we-e-commerce ka-2019 waseNingizimu-mpumalanga ye-Asia owenziwe yiGoogle, iTemasek, kanye neBrain & Company, izinga lokukhula elimaphakathi laso sonke isikhathi sika-2015-2025 se-e-commerce singama-29%. Ngezinga elinjalo lokukhula okusheshayo, ithuba lokuthi ubambe iqhaza emakethe yebhizinisi eliku-inthanethi livuleke kakhulu.
Ngokusho kwe-E-commerce Association (VECOM), kusukela ngo-2019, cishe ama-42% amabhizinisi anesizindalwazi, okufika ku-37% kuwo athole ama-oda ngewebhusayithi. Akuwona amakhasimende adayisayo kuphela, amakhasimende angamabhizinisi a-oda nge-akhawunti yewebhusayithi ngenani elingafika ku-44%. Lokhu kubonisa ukuthi abasebenzisi kancane kancane baphendukela ekuthengeni izimpahla kuwebhusayithi esikhundleni sokuthenga imikhiqizo yendabuko.
Ngokusekelwe ekushintsheni kokuziphatha kokuthenga ngesikhathi se-COVID, amabhizinisi angabanikazi bamawebhusayithi asenenzuzo yokuncintisana emakethe ye-inthanethi. Ungase ube novalo mayelana nokuncintisana nabangaphambili, kodwa futhi wamukelekile. Ngoba ngokusekelwe kulokho okwenziwa izimbangi zakho, leli yithuba lakho lokufunda, ukuzwa, ukusungula nokudalela iwebhusayithi yakho.
Ngokusho kwedatha, kusukela ngo-2019, amabhizinisi afika ku-55% anokukhiqiza okuzinzile, futhi u-26% abheka iwebhusayithi njengethuluzi eliwusizo kakhulu lokuthengisa umkhiqizo. Ngakho-ke, into yokuqala nedingekayo njengamanje ukuklama iwebhusayithi enzelwe wena nje. U-Mid-Man uzokuphelezela, enze idizayini yewebhusayithi yobungcweti, futhi asize imisebenzi yakho yebhizinisi ukuthi ithuthukiswe futhi ithuthukiswe.
U-MID-MAN uyaziqhenya ngokuba yiyunithi yokwakhiwa kwewebhusayithi enolwazi lweminyaka eminingi yokuqondisa izigwegwe emakethe Yezokumaketha. Sizokuphelezela futhi sikusekele ekuklameni iwebhusayithi yokuthengisa ESEBENZAYO, IKHWALITHI, UKUDLALELA, KANYE NOBUCHWEPHESHE. I-SATISFACTION yakho YISIBOPHO sayo yonke i-TEAM yomklamo wewebhu ku-MID-MAN.
Indawo yemakethe inkundla yempi. Iwebhusayithi iyisisekelo, i-arsenal, nendawo yolwazi lwakho. Uma ungenayo isizinda sewebhusayithi esiyikhwalithi, qala ukuyakha namuhla. Kule nkathi yoshintsho oluqinile lwedijithali, ukuba newebhusayithi akwanele. Ukuba newebhusayithi futhi, ukuyisebenzise ngempumelelo, ukusiza ukuthuthukisa imali engenayo kuwumgomo okufanele uhlose ukuwufinyelela. Ngaphandle kokwakhiwa kwewebhusayithi okukhangayo, udinga ukunaka ulwazi lomsebenzisi. Ngenxa yokuthi ukwakhiwa kwewebhu okunenqubo yokuthenga elula nelula nolwazi kubalulekile kuwena ukuze “uvale ama-oda” namakhasimende kalula, I-MID-MAN AGENCY enohlelo lwezemvelo lwezisombululo zokumaketha eziphelele izoba ibhuloho lokukusiza ukusondela kumakhasimende akho okuhlosiwe. emakethe ye-inthanethi.
Ngamandla edizayini yewebhu, isixhumi esibonakalayo esijwayelekile, nolwazi olunzulu ngomsebenzisi, i-MID-MAN iyaziqhenya ngokuba iyunithi ephambili yokuklama iwebhusayithi ye-QUALITY AND PRESTIGE.
KUNGANI KUFANELE UQAKE IWEBHUSI?
Iwebhusayithi iyisiteshi sokuxhumana futhi iyithuluzi lebhizinisi elihamba phambili namuhla. Iwebhusayithi ifana nobuso obumele wena, ibhizinisi lakho, noma inhlangano yakho kunkundla yobuchwepheshe bedijithali 4.0 IOT.
Ngokuphawulekayo, ngesikhathi esiphezulu sobhubhane lwe-Covid-19, umnotho Womhlaba Wonke wawuthinteke kakhulu. Izimboni eziningi ziye zathinteka ngokuqondile, ezifana nokuthunyelwa kwamanye amazwe, ezokuvakasha, njll., kodwa imali engenayo yokuthenga nge-inthanethi ngamawebhusayithi. Amawebhusayithi amaningi amabhizinisi kanye namakhasi e-e-commerce e-B2C asakhuphuka ngo-20-30%, aze anda kakhulu ngezinto ezibalulekile nemishini yezokwelapha. Lokhu kubonisa ukuthi ushintsho ekuziphatheni kokuthenga kwabasebenzisi kancane kancane luya emakethe ye-inthanethi.
Ngoguquko lwedijithali kanye nendima ebalulekile yewebhusayithi namuhla, asikho isizathu sokuthi ungabaze ukuklama iwebhusayithi futhi ukhuthaze uhlobo lwakho emakethe ye-inthanethi.
I-SEO ejwayelekile yokuklama iwebhusayithi
I-SEO esezingeni eliphezulu yokwakhiwa kwewebhu yenza kube lula kuwe ukuthi ulungiselele futhi ubeke imikhiqizo nezinsizakalo zebhizinisi lakho kusesho LWE-TOP ku-Google. Kwa-MID-MAN, iwebhusayithi yakhelwe ngamazinga we-SEO kusukela ngesikhathi sokwakhiwa kwewebhusayithi, ethuthukisiwe ukusuka kukhodi yomthombo kuye kwezici, i-OnPage ne-OffPage, idizayini ephendulayo, evikelwe ngephrothokholi ye-SSL evumelana nenjini yokusesha. ..
I-WEBSITE DESIGN FOUNDATION KU-MID-MAN AGENCY
Ngokungafani namanye amayunithi wokuklama iwebhusayithi emakethe namuhla, i-MID-MAN ayigcini ngolimi oluthile noma iplathifomu yokuklama. Ithimba lonjiniyela le-MID-MAN elinekhono le-cross-platform lokuklama i-WordPress, i-Laravel, i-React, i-React Native, i-Node JS… izofeza zonke izidingo zesici sakho sokuklama iwebhusayithi.
KUNGANI U-MID-MAN AKHETHA UKWENZIWA KWEWEBHUBHUSI YE-MULTI-PLATFORM?
UKWENZIWA KWEWEBHUBHUSI YOLWAZI OLUNINGI
UKWENZIWA KWEWEBHUSI YANGANGAPHAKATHI
Ifenisha ithathwa njengemboni yobuciko esetshenziswayo. Ngakho-ke, iwebhusayithi yomklamo wangaphakathi idinga ukuhlangabezana nobuhle, ukuheha, futhi ibonise isitayela somkhiqizo webhizinisi lakho. Ukuba newebhusayithi yangaphakathi kusiza ibhizinisi lakho ukuthi likhuphule umkhiqizo wakho futhi lifinyelele ifayela elikhulu labathengi abangahle emakethe ye-inthanethi.
KUSUKA IMIBONO KUYA EKUQWENI
IZINYATHELO ZOKUDALA IWEBHUSITHI YOBUCHWEPHESHE PHAKATHI NENdoda
I-MID-MAN, enesiqubulo somsebenzi ogxile kumakhasimende, ihlale ihlose izixazululo zokusekelwa kwamakhasimende emisebenzini yokuklama iwebhu. Sinenqubo yokusebenza eqondile ukuze sikukhonze ngobungcweti kakhulu.
Abasebenzi bakwa-MID-MAN abanolwazi bahlangana namakhasimende, balalele imibono yokuklama, futhi baxoxe ngezici ozifunayo ekwakhiweni kwewebhu. Ngemva kokubonisana nezixazululo nezici ezifanele izinjongo nezidingo zakho, sihlela umklamo.
Ukuqinisekisa amalungelo akho, ngokuhlanganyela senza idokhumenti yomthetho. Ukuxhawulana okuncane kubonisa umoya omkhulu. I-MID-MAN izoba umngane wakho, ikusize ukuthi wakhe isisombululo esifanele sokuklama iwebhusayithi futhi uphakamise uhlobo lwakho emakethe.
Ngokusekelwe emibonweni yakho, ithimba lokuklama iwebhusayithi le-MID-MAN elinengqondo yokudala nesabelayo lizodala amadizayini amahle, akhangayo, kanye ne-UI/UX-standard yedemo yewebhusayithi. Ngemva kokubuyekeza idemo, ithimba lokuklama lizokwenza ukuhlela ukuze uqedele umklamo onemininingwane.
Kusukela ekwakhiweni esinakho kanye nolwazi oluqoqwe eminyakeni eminingi yokusebenza, ithimba labahleli bohlelo lizohlela uhlelo olujwayelekile lwe-UX (isipiliyoni somsebenzisi) futhi lisebenzise ukuhlelwa kwewebhu ukuze kuqinisekiswe izici ezigcwele ezibalulekile futhi ezilungele iwebhusayithi yakho.
Hlola futhi uhlele
Kulesi sigaba, ukwakheka kwewebhusayithi yakho sekuzophela. Kodwa-ke, ukuze kwakhiwe umkhiqizo ongcono kakhulu nokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi isebenza kahle nangempumelelo, ithimba lezobuchwepheshe le-MID-MAN lizohlola futhi lilinganise ngaphambi kokuthi liqalise ukusebenza.
Ukunikezela okuphelele kungumsebenzi walo lonke ithimba le-MID-MAN. Ithimba le-MID-MAN lizokuqondisa ngabaphathi bewebhu abazinikele nabacabangisisayo. Nakuba iphrojekthi isiqediwe, ithimba le-MID-MAN lihlezi likulungele ukukusekela ekusebenziseni nasekuphatheni iwebhusayithi.
KUNGANI KUFANELE UKHETHE IZINKONZO ZOKUDIYINA Iwebhusayithi LAPHO EZIDINGEKAYO KU-MID-MAN?
I-MID-MAN AGENCY inethimba labasebenzi abanolwazi ekuklameni amawebhusayithi anezimboni eziningi. Ngezinhlobonhlobo zezilimi zokuklama, sihlangabezana nazo zonke izidingo zakho. Xhumana nathi ukuze uthole idizayini yewebhusayithi esebenzayo nesebenzayo.
Ukwakheka kwewebhusayithi okuyisisekelo
Iwebhusayithi yokwethula abantu, izitolo, namabhizinisi aphakathi nendawo namancane
Iwebhusayithi yokuthengisa okujwayelekile
Idizayini yesixhumi esibonakalayo esikhethekile ngesicelo: 1 isixhumi esibonakalayo sekhasi eliyisiqalo
Ukuhlela kwamahhala kwesikhumba: kufika ezikhathini ezi-3
Uhlelo oluyisisekelo olusebenzayo lapho kudingeka
Umthelela wewebhusayithi: Okuyisisekelo
I-Programming Platform: Ongakukhetha
Idizayini ejwayelekile ye-UI/UX - Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi kanye nolwazi lomsebenzisi
Ukuphendula Okujwayelekile - kuhambisana neziphequluli eziningi namadivayisi afana nama-PC, amakhompyutha aphathekayo, amaphilisi, kanye neselula.
Ilungiselela isivinini sokulayisha ikhasi
Uhlelo lwe-SEO olujwayelekile
Ukuphepha kwamahhala kwe-SSL konyaka wokuqala
Ukunikeza ikhodi yomthombo (ikhodi yomthombo)
Iwaranti yempilo yonke kanye nokugcinwa kwayo
I-24 / 7 ukwesekwa kwezobuchwepheshe
Idizayini yewebhusayithi ephezulu
Iwebhusayithi yokwethula izitolo, amabhizinisi amakhulu
Iwebhusayithi yebhizinisi eliku-inthanethi, izindaba, izinsiza, ezezimali, ubuchwepheshe obuhlukile, imidwebo ephezulu…
Idizayini yokusebenzelana ekhethekile lapho idingeka khona: Inombolo engenamkhawulo yezikhumba
Ukulungiswa kwamahhala kwesikhumba: Kufika ezikhathini ezi-5
Izinhlelo zokusebenza ezithuthukile lapho kudingeka
Umthelela wewebhusayithi: Okuthuthukile
Ukuxhumana okuhlanganisiwe kweziteshi eziningi nomuntu wesithathu
Izaphulelo ezinkokhelweni zesevisi yokumaketha
Ukuphendula Okujwayelekile - kuhambisana neziphequluli eziningi namadivayisi afana ne-PC, amakhompyutha aphathekayo, amaphilisi, iselula, ezihambayo,...
KUNGANI I-WEBSITE DESIGN E-MIKO TECH INEMANENI AMANINGI?
Idizayini yewebhusayithi ethuthukisiwe ngokuya ngemibandela esemqoka egxile kumakhasimende akho umgomo uMID-MAN ehlose kuwo. Siyaqonda ukuthi kunoma iyiphi imboni yanoma yimuphi usayizi, kunesidingo sokuklama iwebhusayithi esebenzayo nesebenzayo. Ngakho-ke, izinsizakalo zethu zokuklama iwebhu zanelisa wonke amakhasimende ngentengo efanelekile.
IPHENDUA IMIBUZO LAPHO UDIYELA IWEBHUSITHI EMKHATHINI-MUNTU
Udinga ukufunda okwengeziwe mayelana nezinsizakalo zokuklama iwebhusayithi ye-MID-MAN? Bheka izimpendulo ngezansi!
Yini oyiqondayo nge-Website Design?
Ukwakhiwa kwewebhu noma ukwakheka kwewebhusayithi kuwumsebenzi wokwakha iwebhusayithi yomuntu ngamunye, inkampani, ibhizinisi, noma inhlangano. Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokwakheka kweWebhu: ukwakheka kwewebhu okumile kanye nokwakheka kwewebhu okuguquguqukayo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka isihloko esithi Yini i-website design?
Iyini i-SEO idizayini evamile yewebhu?
Idizayini evamile yewebhu ye-SEO yiwebhusayithi enokulungiselelwa nezici ezivumela izinjini zokusesha ezifana ne-Google, i-Yahoo, ne-Bing... ukukhasa nokuqonda yonke iwebhusayithi kalula. Bona indatshana enemininingwane yamagama angaphezu kuka-3000 mayelana nokwakhiwa kwewebhusayithi okujwayelekile kwe-SEO
Iyini idizayini yewebhu ephendulayo?
Idizayini yewebhu ephendulayo imane iyindlela yokusetha nokwakha amawebhusayithi ahambisanayo futhi uwabonise kuzo zonke izinhlobo zezinto zikagesi, njengamafoni, amaphilisi, amakhompyutha aphathekayo, ama-PC, njll. .. nganoma yisiphi isinqumo, noma yiluphi uhlaka lwewebhu.
Kubiza malini ukuklama le webhusayithi?
Ngokuya ngezidingo nezici zewebhusayithi ngayinye, iyunithi yokuklama inikeza izindleko ezihlukene zokuklama iwebhusayithi.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda ukuklama iwebhusayithi?
Isikhathi sokuqeda iwebhusayithi sizoncika ezintweni eziningi njengendawo iwebhusayithi ehlose kuyo, amakhasimende; Isakhiwo sokushintshana nozakwethu, isikhombimsebenzisi esilula noma esiyinkimbinkimbi; ukusebenza kwewebhusayithi, nezinye izici. Isikhathi sokuklama iwebhusayithi ku-MID-MAN ngokuvamile sisuka emavikini angu-3-4, ngokusho kokushintshana nozakwethu.
Ingabe umklami wewebhusayithi unenkontileka ecacile?
U-MID-MAN uzibophezele ekubeni nenkontileka yonke yokuvikela izintshisekelo zozakwethu, ukuqinisekisa ukwethembeka, ukubeka izinto obala, nokwethembeka lapho ebambisana.
Ngakho konke okuhlangenwe nakho, ukuzinikela kanye nobungcweti, uMid-Man ngokuzethemba unikeza amabhizinisi isixazululo esingcono kakhulu sokwenza iwebhusayithi echwepheshile i-deisgn.
I-CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ DỊCH VỤ MID-MAN
Inombolo yocingo 1: +84 90 3401508
Inombolo yocingo 2: +1 (484) 414-5687
Iwebhu ye-Trang: https://mid-man.com/
© 2021 Mid-Man - Isixazululo Esithenjwa Sokuklama Iwebhusayithi Yebhizinisi Laku-inthanethi
Sicela ukhethe ingxoxo ukuze uqale ukuthumela imiyalezo.